Iplagi ye-AMP eneGoogle Analytics-XH
Iplagi ye-AMP eneGoogle Analytics
Umguquleli we -HTML-ukuya-AMPHTML kunye neeplagi ze- AMPHTML zifakela ngokuzenzekelayo iikhowudi zokulandela ze-Google Analytics kwiphepha le-AMP kaGoogle. Nokuba ukulandelwa kweakhawunti ezininzi kuyaxhaswa!
Faka ithegi <amp-analytics>
Isantya esenziwe ngamaphepha eselfowuni senza ukuba ikhowudi yokuKhangela kuGoogle ifakelwe kwindawo yakho kwaye ifunde i- ID yokulandela umkhondo kaGoogle , okt inombolo ye-UA .
Umvelisi we-AMPHTML ukwaqaphela ukusetyenziswa okunokwenzeka kwamanani aliqela e-UA , njengoko kusetyenziswa, umzekelo, kwi 'Multiple Accounting Tracking' . Umvelisi we-AMP okwi-intanethi uguqula ngokuzenzekelayo onke amanani e-Google Analytics UA abe yitagi ye 'amp analytics' kwaye ngenxa yoko isebenzise ukulandelela okukhoyo kwangaphambili kukaGoogle kwiphepha le-AMP!
Ngolu hlobo lokudityaniswa kukaGoogle kuhlalutyo, yonke idatha yokulandelela uhlalutyo lwephepha le-AMP livela kweyakho (!) Iakhawunti yeGoogle Analytics , ke uya kuqhubeka ufumana yonke idatha yokulandela umkhondo ye-AMP eqokelelwe kwindawo yesiqhelo!
Umvelisi we-AMP kwi-Intanethi uxhasa zonke ezi nguqulelo zikaGoogle zilandelayo:
Uhlalutyo lukaGoogle 360 ° (analytics.js)
Uhlalutyo lukaGoogle (ga.js)
Uhlalutyo lwe-Urchin (urchin.js)
UChazo lweGoogle IP engaziwayo 'i-anonymizeip'
Kwamanye amazwe (umzekelo eJamani) enye imeko kufuneka ihlangane ukuze ikwazi ukusebenzisa uGoogle Analytics ngokuhambelana nemigaqo yokukhusela idatha: Ukusetyenziswa kwe-IP ukungaziwa. Ngesi sizathu, i-Accelerated Mobile Pages Generator ixhasa umsebenzi kaGoogle Analytics 'anonymizeip' kwaye icwangcisa i-octet yokugqibela yedilesi ye-IPv4 okanye ii-bits ezingama-80 zokugqibela zedilesi ye-IPv6 ukuya ku-zero ngaphambi kokugcina idatha yomsebenzisi. Oku kuthetha ukuba idilesi ye-IP epheleleyo ayibhalwa kwi-hard drive ye-Google Analytics server!
Ukuchazwa kwegama le-IP ngoGoogle akusebenziswanga ngokubonakalayo ngumvelisi wamaphepha eselfowuni, kodwa siseto esisemgangathweni sethegi 'ye-amp-analytics' evela kumaxwebhu asemthethweni e-AMPHTML.
Idatha kwithegi 'ye-amp-analytics' ke ngoko idluliselwa ngokungaziwayo!
Ulwazi lokhuselo lwedatha kaGoogle yovavanyo lwamaphepha e-AMP
Ukuze kongezwe ngokuzenzekelayo ukulandelelwa kweGoogle Analytics ukuze kusetyenziswe ukuthobela imigaqo yokukhusela idatha, kufuna inqaku elicacileyo kwisibhengezo sokukhusela idatha kwiwebhusayithi yakho!
Kumaphepha e-AMP avelisiweyo afumaneka nge-amp-cloud.de, ekupheleni kwekhasi ngalinye le-AMP lenziwa kwizibhengezo zokhuselo lwedatha lwe-amp-cloud.de, enolwazi olufunekayo lokukhusela idatha yokulandela umkhondo kuGoogle.
Nangona kunjalo, ukuba usebenzisa enye ye-amp-cloud AMP plugins, kuya kufuneka ufake inqaku kuGoogle yokuHlola umkhondo kumgaqo-nkqubo wabucala wewebhusayithi yakho!
amp-cloud.de ayithathi uxanduva lwayo nayiphi na into yokophula umthetho.Kufuneka ujonge kwaye uqiniseke ngokwakho ukuba iakhawunti yakho yeGoogle Analytics kunye namaphepha e-AMP amiselwe ngendlela ekhuselekileyo ngokusemthethweni! (Igama eliphambili: Ikhontrakthi kaGoogle yohlalutyo lokuqhutywa kwedatha ngokwe-§ 11 BDSG ).